I-Etihad Airways: Isidingo esiphansi namandla endiza, abagibeli abambalwa ngama-76% ngonyaka we-2020
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-Etihad Airways: Isidingo esiphansi namandla endiza, abagibeli abambalwa ngama-76% ngonyaka we-2020
Airlines • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UAE Breaking • Izindaba Ezihlukahlukene
Mashi 4, 2021
I-COVID-19 inyakazise isisekelo somkhakha wezindiza, kepha u-Etihad wema eqinile futhi ukulungele ukubamba iqhaza elibalulekile njengoba umhlaba ubuyela ezindizeni
I-Etihad Airways ibithwala abagibeli abayizigidi ezingama-4.2 ngonyaka wezi-2020 ngesibalo sokulayisha esingu-52.9%
I-Etihad Airways bekuyinkampani yezindiza yokuqala emhlabeni lapho kugonywe khona abasebenzi abasebenza ezindizeni abangu-100%
Ngaphambi kwalolu bhubhane, i-Etihad ibiphambi kwezinhloso zenguquko ezibekwe ku-2017, njengoba ibhalise ukukhuphuka okwenyuka ngama-55% emiphumeleni emikhulu ngokuphela konyaka ka-2019
Etihad Airways isimemezele imiphumela yayo yezezimali nokusebenza konyaka we-2020, iqopha ukwehla okungama-76% kwabagibeli abathwalwe unyaka wonke (izigidi ezingama-4.2, uma kuqhathaniswa nezigidi eziyi-17.5 ngonyaka wezi-2019) ngenxa yesidingo esiphansi kanye nokwehla kwamandla endiza okubangelwe ukwehla komhlaba okungenakulinganiswa kwezentengiselwano ukundiza.
Njengomphumela wesifo esiwumshayabhuqe se-COVID-19 kanye nemikhawulo yezindiza nokuhamba, inani labagibeli eliphelele lehliswe ngo-64% ngonyaka wezi-2020 laya ku-37.5 billion akhona amaSeat Kilometer (ASKs), ehla esuka ezigidini ezingama-104 ngonyaka wezi-2019, kanti isibalo somthwalo wezihlalo siyehla Amaphesenti angama-52.9%, amaphesenti angama-25.8 aphansi uma kuqhathaniswa nango-2019 (2019: 78.7%).
Inkampani yezindiza iqophe imali engenayo yabagibeli eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-US ngo-1.2, yehle ngo-2020% isuka ku-US $ 74 billion ngo-4.8, ngenxa yezinsizakalo ezimbalwa ezihleliwe kanye nabantu abambalwa abahambayo. Okube nomthelela kulokhu kube ukumiswa okuphelele kwezinsizakalo zabagibeli zingena ziphuma e-UAE kusukela ekupheleni kukaMashi kuze kube ekuqaleni kukaJuni 2019 ukukhawulela ukusabalala kwe-COVID-2020, ngokuhambisana negunya likahulumeni wase-UAE. Bangaphezu kuka-19% abagibeli abaphelele abathwelwe ngo-80 abagibeliswe ngezinyanga ezintathu zokuqala zonyaka, okukhombisa ukwehla okukhulu kwesidingo njengoba inkinga yomhlaba yaya ngokuya ngokuya konyaka.
Ukusebenza kwempahla yezindiza, kunalokho, kuqophe ukusebenza okuqine kakhulu, ngokunyuka okungu-66% kwemali engenayo kusuka ku-US $ 0.7 billion ngo-2019 kuya ku-US $ 1.2 billion ngo-2020, okuqhutshwa yimfuno enkulu yezinsiza zezokwelapha ezifana ne-Personal Protective Equipment (PPE) nemithi yokwenziwa kwemithi, ebhangqwe nomthamo olinganiselwe wokuthwala izindiza emhlabeni. Isivuno seCargo sabona ukuthuthuka okungama-77%.
Izindleko zokusebenza okwamanje zehle ngama-39% unyaka nonyaka, kusuka ku-US $ 5.4 billion ngo-2019 kuya ku-US $ 3.3 billion ngo-2020, ngenxa yenhlanganisela yamandla ancishisiwe nezindleko ezihlobene nevolumu, kanye nokugxila ezinhlelweni zokuthintela izindleko. Izindleko ezincishisiwe zinciphiswe ngama-25% kuya ku-US $ 0.8 billion (2019: US $ 1.0 billion) kulesi sikhathi, naphezu kokuma kwazo okungaguquki, ngenxa yemizamo yokuphathwa kwemali nokuphathwa kwemali ngesikhathi senhlekelele, ngenkathi izindleko zezezimali zehliswe ngama-23% ngokugxila okuqhubekayo kubhalansi ukuhlela kabusha ishidi.
Kukonke, lokhu kuholele ekulahlekelweni kokusebenza okuyisisekelo kwe-US $ 1.70 billion (2019: US $ 0.80 billion) ngo-2020, i-EBITDA iphendukela ku-US $ 0.65 billion ongemuhle (2019: positive US $ 0.45 billion).
Ngaphambi kwalolu bhubhane, i-Etihad ibiphambi kwezinhloso zenguquko ezibekwe ngonyaka wezi-2017, njengoba ibhalise ukukhuphuka okwenyuka ngamaphesenti angama-55 emiphumeleni emikhulu ngasekupheleni konyaka ka-2019. Lo mfutho uqhubekile nasekuqaleni kuka-2020, nerekhodi lokuqala lekota (Q1) lokho kukhombise ukwenziwa ngcono konyaka nonyaka ngama-34%. Inkampani yezindiza iyaqhubeka nokukhomba ukuguqulwa okuphelele ngonyaka ka-2023, njengoba isheshise izinhlelo zayo zenguquko futhi yakha kabusha inhlangano ngesikhathi sobhadane yaba yibhizinisi eliqinile futhi elisheshayo.
UTony Douglas, oyiChief Executive Officer, uthe: “UCovid unyakazise isisekelo somkhakha wezindiza, kodwa ngenxa yabantu bethu abazinikele kanye nokwesekwa ngabaninimasheya, u-Etihad ume eqinile futhi ukulungele ukubamba iqhaza elibalulekile njengoba umhlaba ubuyela ezindizeni. Yize kungekho noyedwa owayengabikezela ukuthi u-2020 uzokwenzeka kanjani, ukugxila kwethu ekusebenziseni okuyisisekelo kwezamabhizinisi eminyakeni emithathu eyedlule kubeke i-Etihad ethubeni elihle lokuphendula ngokuqinile enhlekeleleni yomhlaba. Sithathe izinyathelo ezinqala zokuvikela abantu bethu kanye nezivakashi zethu, sithuthukise uhlelo oluhola phambili embonini yezempilo kanye nenhlanzeko, futhi sihlele kabusha ibhizinisi lethu ukuze lisibeke kangcono ukuze silulame. Njengenkampani yezindiza yokuqala emhlabeni yokugoma bonke abashayeli bezindiza bethu kanye ne-cabin crew kulwa ne-COVID, sikulungele ukwamukela abahambi abazobuya bezothola uhambo oluhamba phambili nge-Etihad Airways. ”
U-Adam Boukadida, oyiChief Financial Officer, uthe: “Siqale unyaka ngokuqina ngokweqa imigomo yethu yezinguquko kuQ1 futhi besibheke phambili ekusebenzeni okuqinile konyaka ozayo - bese ubhadane luqala ukubamba. Njengoba izimali zabagibeli zingasasebenzi, sithathe izinyathelo ngokushesha ukuvikela impilo yezezimali yesikhathi eside, ngezindlela ezahlukahlukene zokunciphisa umthelela weCovid ebhizinisini lethu. Naphezu kwengcindezi enkulu ekuphumeni kwemali yethu, sagcina ukwehla kwemali ngokugxila ekulawulweni kwezindleko, ukukhulisa imali ethwala izimpahla, ukukhulisa amandla ethu esivumelwano nokukhulisa izikhungo ezintsha zezikweletu ezinjenge-sukuk yokuqala yezinguquko ezixhumene nokusimama emhlabeni. Lokhu kuxhaswe yi-Etihad ukugcina i-A enesilinganiso 'sesimo esihle' sikaFitch, okwenza kube ngenye yezindiza ezimbalwa ukugcina isilinganiso sangaphambi kwe-COVID. ”
Isifinyezo semiphumela ye-2020:
Imali engenayo yabagibeli (US $ billion) 1.2 4.8
Imali engenayo yezimpahla (US $ billion) 1.2 0.70
Imali engenayo yokusebenza (US $ billion) 2.7 5.6
I-EBITDA (US $ billion) (0.65) 0.45
Umphumela wokusebenza oyisisekelo (US $ billion) (1.7) (0.8)
Ingqikithi yabagibeli (isigidi) 4.2 17.5
Amakhilomitha ezihlalo akhona (izigidigidi) 37.5 104.0
Isihlalo sokulayisha (%) 52.9 78.7
Inani lezindiza 103 101
I-Cargo tonnage (umlenze wamathani angu-000) 575.7 635.0
INordwind Airlines Iqala Kabusha Indiza Esuka eSt ...
Ukuhamba Ngaphesheya kweNew York City yami, iManhattan Zip Code
Ukubuyiselwa Okuhamba Phansi Kwe-Post-COVID Corporate Air Travel